In Ka Badan 40 Ruux Oo Ku Dhintay Shil Ka Dhacay Dalka Bulgaria – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
In Ka Badan 40 Ruux Oo Ku Dhintay Shil Ka Dhacay Dalka Bulgaria
Last updated Nov 23, 2021 141 0
Ugu yaraan 45 ruux ayaa dhimatay kadib markii uu dab qabsaday gaari rakaab siday kaas oo marayay mid kamid ah wadooyinka dalka Bulgaria ee dhaca qaaradda Yurub, waxaana inta badan dadka rakaabka ah ay ahaayeen dalxiisayaal ka yimid woqooyiga Maqduuniya.
Masuuliyiin katirsan xukuumadda Bulgaria oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in ugu yaraan 45 ruux ay ku dhinteen shilkaan oo ka dhacay meel 40- KM dhanka Noofur kaga beegan caasimadda waddankaas ee Sofia.
Waxay intaas ku dareen in 7 ruux oo kamid ahaa rakaabkii saarnaa gaariga lasoo bad baadiyay kuwaas oo la geeyay mid kamid ah isbitaallada ku yaalla caasimadda waddankaas.
Saraakiisha Bulgaria ayaa sheegay in aan la garanayn sababta shilka keentay, balse waxa ay u muuqatay in baska uu ku dhacay xayndaab ku yaala wadada wayn ka hor inta uusan dabku qabsan.
Ra’iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee Bulgaria ayaa ka tacsiyeeyay dhacdadaan, isagoo saxafiyiinta u sheegay in tani ay tahay musiibo xanuun badan.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaas ayaa sidoo kale sheegay in dadka ay gabi ahaanba gubteen kuwaas oo dambas isku badalay, isagoona intaa ku daray “goobta ayaa aheyd mid argagax leh, Weligay ma arag wax sidan oo kale ah.”